Video: Microsoft Windows Phone 7 Falanqeynta Kama Danbaysta ah | Martech Zone
Video: Microsoft Windows Phone 7 Falanqeynta kama dambaysta ah
Sabti, Sebtember 11, 2010 Talaado, September 4, 2012 Douglas Karr
Shalay markay ahayd Isku dar, waxaan helnay inaan aragno mudaaharaadkii ugu horreeyay ee dadweynaha ee nuqulkii ugu dambeeyay ee Microsoft ee Windows Phone 7. Waakan fiidiyowga ah Windows Phone 7 banaanbax.
Windows Phone 7 wuxuu leeyahay khibrad isticmaale oo u gaar ah oo ka duwan kuwa kale ee is-dhexgalka isticmaalaha caadiga ah ee ku dhex jira astaamaha, marintooda ayaa ah mid la wado. Maaddaama codsiyada lagu dhisi karo .NET iyo Silverlight, horumariyaha kasta ee Microsoft ee halkaas jooga wuxuu u horumarin karaa taleefanka ama barnaamijyadooda hadda jira ama cayaaraha si fudud ugu diri karaa taleefanka. Taasi waa heshiis weyn maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah kuwa horumariya ee Microsoft halkaas - shaki kuma jiro inaad arki doontid tiro badan oo codsiyo ganacsi ah oo loo dhisay qalabka.
Hadliyuhu wuxuu sharxayaa in barnaamijyada la oggolaaday, laakiin loo maro hanaan ka adag sida loo isticmaalo Apple. Waxay aaminsan yihiin inay noqon doonto meel u dhexeysa galbeedka duurjoogta ah ee Droid iyo hannaanka xakamaynta xad dhaafka ah ee Apple. Fiiri waxa uu leeyahay qiyaastii 9:25: oops!
Tags: Nokiadaaqadahataleefanka daaqadahadaaqadaha taleefanka 7
Suuqgeynta Faleebo Qeybta 2: Ha nuugin.